Darjeeling Hills Station Tour | Akwụkwọ Darjeeling ezumike nchịkọta
| 120 njegharị
Otu n'ime otu nwanna nwanyị asaa nke North East India, Gangtok Sikkim na India nke tii Darjeeling na ebe ndị mara mma ya dị elu nwere ike ime ka ndị njem nleta. N'ịbụ ndị a na-ahụ anya site na okike, njem nlegharị anya Darjeeling ga-eme ka ndị njem nletaghachi n'oge okpomọkụ. E nwere ọtụtụ nchịkọta njem na Darjeeling dị na Darjeeling Gangtok Tour.
Ntughari site na Bagdogra Airport / New Jalpaiguri ọdụ ụgbọ okporo ígwè Ịpụ na Gangtok (125 kms. / 4.5 hour). Ọnụ ụzọ ámá Sikkim. N'ịbụ ndị ebe ugwu Himalayan nọ, Gangtok bụ obodo mara mma. Okpukpe Buddha bụ okpukpe bụ isi n'ógbè a. Nyefee na nkwari akụ. Ezumike nke ụbọchị na ntụrụndụ. N'abalị na-anọ na GANGTOK.
Mgbe nri ụtụtụ na-aga na Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Tibetology, Dordul Chholten stupa, Rumtek Monastery, Ropeway Ride na Shanti elere anya. N'abalị na-anọ na GANGTOK.
Mgbe nri ụtụtụ, njem gaa na Tsangu Lake & Baba Mandir na elu 13,500 ụkwụ. (Ọ bụrụ na ọ bụghị ebe obibi Tsangu ka enwere ike ịnweta ya, n'ihi na ọnọdụ ihu igwe na-adịghị mma, anyị ga-eleta Namachi, nke pụtara "Eluigwe." Nestled n'etiti ugwu ndị dị elu na 5,500 ft. Ọ na-enye echiche dị iche iche nke snow na cached mountains na vas stretches nke ndagwurugwu) na laghachi Gangtok. N'abalị na-anọ na GANGTOK.
Mgbe nri ụtụtụ na-apụ na Darjeeling (130 kms / 4 hrs), nke dị na North Bengal na-ekiri site na Himalayan Ranges na Tea Gardens. Mgbe ị bịarutere, Nyefee na nkwari akụ. Oge ezumike bụ oge ezumike. N'abalị na-anọ na DARJEELING.
N'ihe ututu nke ubochi Ugwu n'ugwu ka ha hu oke anyanwu n'elu ugwu Kanchanjunga, En-uzo gaa na ebe obibi ndi ozo Ghoom na Batasia aka. Mgbe nri ụtụtụ na-aga ileta ugwu ugwu Himalayan, Zoo Himalaya, Ụlọ Nzukọ Japan, Ogige Rock, Gangamaiya Park na Ogige Handicraft nke Tibet, En-ụzọ ị ga-enwe nlegharị anya banyere Ogige Darjeeling Tea. N'abalị na-anọ na DARJEELING.
Mgbe nri ụtụtụ gafere na Bagdogra Airport / New Jalpaiguri ọdụ ụgbọ okporo ígwè (96 kms / 3 hrs) maka aga njem. Na-aga eleta ahịa na Pasupati Market (Nepal Border) na Lake Mirik (Ọdọ Mmiri Ara nke gbara ugwu na osisi pine gbara gburugburu). Ụlọ na-emechi.